NIKELA SUGAR 45 RBU 12.5K
NIKELA SUGAR 45 RBU 25K
NIKELA SUGAR 45 RBU 50K
NIKELA SUGAR 45 RBU 75K
NIKELA SUGAR 45 RBU 100K
I-OIL NE-GAS PRICES
IKOMIDI LAKHO LIYIMPAWU YOKUQALA
I-SI Group yinkampani yezentengiselwano yezentengiso yezwe jikelele kanye nokuthola imininingwane engaphezu kweminyaka engama-20. I-SI Group inenethiwekhi yokuxhumana ethatha umhlaba wonke inikeze amandla okuhlinzeka ngezwe noma inkampani ngalokho okudingayo. Siphatha izinto zokuhambisa nezinqwaba zeSoft Commodities ngesimo seRice, Ushukela, iSoybean, iCorn njll futhi sithole izinto ezintsha ezimakethe ezivelayo. I-SI Group ingasiza ekwakheni izimakethe ezingakaze zibe khona emazweni amaningi ngokusiza ohulumeni ukwethula izilimo ezintsha nezinqubo zokuhlanza ukuletha emakethe yomhlaba. Zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi ngezicelo ezithile zanoma iyiphi impahla ethambile njengoba sizokwazi ukuyikhipha.
Izimpahla Eziqinile ezifana ne-Iron Ore, Amalahle, Izimbi Eziyisikhutha, I-Copper ne-Oyili ziyabonakala futhi ziyatholakala yize kuyi-SI Group. Sinobudlelwano besikhathi eside nohulumeni namabhizinisi emhlabeni jikelele okusivumela ukuthi sinikeze izinto zangempela ngamanani wokuncintisana. I-SI Group vets zonke izinkampani esisebenzayo ukuqinisekisa ukuthi zinamandla okuqedela umsebenzi ngokuphumelelayo. Simelela abathengi nabathengisi futhi sinikeze izixazululo zombili, uma ungumhlinzeki ofuna izithameli zomhlaba wonke neqembu eliqinile ukumaketha izimpahla zakho thinta thina namuhla.
I-SI Group ingumhlinzeki we-Iron Ore, Copper, Coal, Scrap Metal, Amafutha kanye nemikhiqizo yezolimo emhlabeni jikelele.
Xhumana nathi namhlanje info@sigroupco.com futhi uthole impendulo kungakapheli amahora angama-24.
I-logo ye-SI Group yathuthukiswa futhi yadalelwa eSwitzerland ukufanekisa izimpahla eziyigugu ezimelelwa ngokubomvu njengetshe eliyigugu. Lezi zinto eziyigugu ezitholakala emhlabeni wonke ziphuma ku umhlaba ulungiswa futhi uhanjiswa emhlabeni jikelele ngomkhumbi kuwo wonke olwandle emhlabeni jikelele. Isiliva lixhunyiwe okwezentengiso ngokubomvu kufanekisela imikhumbi nezindlela zokuthuthwa kolwandle ezinhlanu zomhlaba.
I-800 SQUARE-VICTORIA MONTREAL (QUEBEC) IKHANADA H4Z 1A1
I-copyright © 2020 | Iqembu le-SI | Wonke Amalungelo Agodliwe.